Jimicsiga jimicsiga ee lamaanahaaga (Qeybta II) | Ragga Stylish
Naadiga 'Gentlemen' | | Daryeelka shaqsiyeed, Fitness, Waqtiyada firaaqada, Lamaanaha iyo Galmada
Sababtoo ah laba ayaa ka xiiso badan ...
In qaybta koowaad Waxaan kuu sharxeynaa sida loo sameeyo jimicsi si looga shaqeeyo Quadriceps, lugaha, cirridka iyo caloosha oo labo labo ah. Qaybtaan labaad iyo tan dambe, waxaan diirada ku saaraynaa fidin iyo dheereyn.
Sameynta jimicsiga waxay si joogto ah u kordhisaa heerarka tamarta waxayna xitaa kaa caawineysaa inaad dareento fiicnaan shucuur ahaan. Ciyaartooy xirfadle ah ayaa 5 jeer kayar ciyaartooyada hiwaayadda ah, maxaa yeelay jimicsiga wuxuu ku siinayaa iska caabin, wuxuu ka hortagaa dhibaatooyinka wadnaha, wuxuu sii daayaa endorfinyada wuxuuna kiciyaa neurotransmitters, wuxuu kaa dhigayaa mid dabacsan, wuxuu hagaajiyaa dulqaadka gulukooska, wuxuu kaa caawinayaa inaad si fiican u ekaato, wuxuu kaa dhigayaa inaad dareento xaalad wanaagsan, wuxuu xoojiyaa muruqyada, wuxuu kugu hayaa miisaan miisaaman, wuxuu fududeeyaa hurdada iyo nolosha galmada waxyaabaha kale ...Jimicsiga waa muhiim lamaanahaaga ama la’aantiis, maxaa yeelay aakhirka wey na caawinaysaa ku gabow xaalad wanaagsan, faraxsan, dabacsan, adkaysi leh oo leh a nolosha galmada firfircoon lamaanahayaga.
Labadaba ku fadhiiso sagxada dhulka, midna gadaashiisa, sameysashada tareen. Ta hore waxay taageertaa badhida dusheeda lamaanaha. In aad sare u qaadi doonto lugahaaga adigoo ka rogaya lafdhabartaada lafta ilaa madaxa. Si tartiib tartiib ah u socod iyo hoos u dhaqaaq. Dhanka kale, kan kale ayaa lugaha horay u kala bixinaya iyadoo talooyinka cagaha kor loo qaadayo, laalaabka jirridda iyo hoos u dhigista gacmaha iyo madaxa, si loo kala bixiyo dhabarka jirka iyo qoortiisa oo dhan.
Dabaqa, kan hore wuxuu ku yaal lafaha fadhiya, lugaha laaban, cagaha lugta la taageeray iyo sadarka laf-dhabarta iyo madaxa oo ku toosan dabaqa. Midda labaad, waxay ku jiiftaa dhulka iyadoo lugaha laaban yihiin gacmahana la saarayo dhinacyada madaxa. Wuxuu si adag u kala bixinayaa gacmihiisa wuxuuna hubinayaa inaysan dhulka ka kicin. Isla mar ahaantaana, kan sagxadda jiifa waa inuu lugaha kor u qaadaa, isagoo keenaya xagga sanka si uu u dhammaystiro fidinta jirka intiisa kale.
Si lugaha loo kala furfuro
Inta midi dhulka jiifto, kan kale ayaa istaaga ama jilba joogsada, wuxuu qaadayaa hal cag labadiisa gacmood dhexdooda wuxuuna kor u qaadayaa lugtiisa ilaa 45 darajo. Labada gacmoodba, kala soo laabo cagaha lammaanaha ciribta iyo suulasha ilaa laga gaaro halka ugu dambeysa ee laalaabidda. Halkaas ayaa lagu hayaa ilbiriqsiyo yar si loo dabciyo iyadoo cagaha loogu rogayo labada dhinacba. Lugaha kala beddel ka dibna la beddelo doorka lamaanahaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Jimicsiga jimicsiga ee lamaanahaaga (Qeybta II)
Bacaha Mulberry ee ragga